Kpido: social media gurus
N’ụlọ akwụkwọ sekọndrị nwa m nwanyị, ha nwere mpaghara dị nsọ nye ndị agadi akpọrọ “akwa rug”. “Ihe ndị mebiri emebi” bụ akụkụ dị ntụsara ahụ e wuru n’otu ógbè ndị isi nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya bụ́ ebe ndị nọ n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị pụrụ ịnọkọ. Enweghi ndị ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ obere klas na rugoro akwa. Meanda pụtara, ọ bụghị ya? Na tiori, o n’enye ndi okenye mmuta nke mpako. Ma eleghi anya ya
Nke a bụ rant. Gha, ụgha, ụgha. Ike gwụrụ m nke ukwuu ịnụ ihe nzuzu niile nke ndị na-elekọta mmadụ 'gurus' na-agwa ndị ahịa. N'abalị ụnyaahụ, emere m Twitter kọwara ọzụzụ na Linda Fitzgerald na ndị otu ya, jikọrọ Women International. Ndị otu a nwere ụmụ nwanyị azụmaahịa nwere ahụmahụ, ndị nwere ikike. N'okwu ha: Ọhụụ anyị bụ "inye ụmụ nwanyị ike n'ụwa niile". Ọrụ ahụ bụ ime ka ụmụ nwanyị baa ọgaranya, gbaa ume, na ịkwadebe ha n'ụzọ na-eduga